Iyo itsva iPad Air, chikara chinomhanya zvakanyanya | Nhau dze iPhone
Iyo itsva iPad Air, chikara chiri kumhanya zvakanyanya
louis padilla | | iPad Air, Noticias
Apple yakavandudza iyo iPad Air, uye yakazadzisa zvaitarisirwa. Iko kubatanidzwa kweiyo yakanyanya simba processor iyo Apple inayo munharembozha, iyo M1, uye yakanyanya kumhanyisa yekubatanidza, 5G, ndizvo zvitsva zvayo.
Mwoyo weiyo itsva iPad Air watove wakafanana neiyo yePadad Pro: wemasimbaose M1 inoshandiswa neApple munharembozha nemakomputa. Iyo processor inokwanisa kuita mabasa akaomarara pasina kudiwa kwemhepo uye ine simba rakawanda rinoshandiswa. Mitambo inonyanya kudiwa, kugadzirisa mapikicha nemavhidhiyo kana kuona multimedia zvinyorwa hazvizove diki dambudziko reiyi iPad, iyo ichava nehupenyu hwakareba uye inogona kuita padanho repamusoro.
Iyo USB-C yekubatanidza yakagadziridzwa zvakare, iko zvino inotsigira kukurumidza kwekufambisa data kusvika ku10Gb/s, iyo yakanaka kushandisa madhiraivha ekunze uye kupinza mapikicha makuru nemavhidhiyo. 5G yekubatanidza (inosarudzika) ichakubvumidza iwe kushanda, kutamba kana kunakidzwa nemultimedia zvemukati chero kupi nekumhanya kwakanyanya. Ivo vakavandudzawo kamera yekumberi iyo ikozvino inobvumira 4K vhidhiyo uye inoenderana neCentre Stage, iyo basa raunogara uri pakati pechifananidzo kunyangwe ukafamba.
Zvimwe zvese zvakatemwa pamwe chete nemagadzirirwo anoramba akamira. Isu tinoenderera mberi neTouch ID sechiziviso system, iyo skrini inoramba iri 10,9-inch Liquid Retina, uye ichiri kuenderana nechizvarwa chechipiri Apple Penzura.
Tinogona kuiwana mune akati wandei mavara: nzvimbo grey, nyeredzi chena, pink, yepepuru uye yebhuruu. Mutengo weiyo iPad Air 2022 kubva 64GB WiFi i679 euros, panguva Wi-Fi + 5G inotanga pa879 euros. Mhando dze 256GB iri mutengo pa849 € (Wi-Fi chete) uye 1010 € (Wi-Fi + 5G). Ivo vanogona kuverengerwa kubva munaKurume 11, nekutenga zvakananga kubva munaKurume 18.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Air » Iyo itsva iPad Air, chikara chiri kumhanya zvakanyanya
iPhone 13 uye iPhone 13 Pro inotanga ruvara rutsva rwegirinhi
Tronsmart inopa yavo itsva Bang 60W inotakurika mutauri yakanakira mapato